Global Voices teny Malagasy » Ny Maripejy Tsy Mahazatra, Mifono Misitery Indraindray Hita Ao Anatin’ireo Boky Tranainy Ao Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jolay 2017 4:57 GMT 1	 · Mpanoratra Airi Sugihara, Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Ny fivarotam-boky ao Fukui, Japana. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Efa nividy boky avy nampiasaina tao amin'ny fivarotam-boky ve ianao, ary nahita zavatra tsy nampoizina tao anatin'izany toy ny maripejy nampiasain'ny tompony teo aloha?
Raha toy ianao ka efa sendra izany dia tsy irery ianao. Ny maripejin'ny boky tsy mahazatra izay navela tao anatin'ny boky efa nampiasaina dia toa zava-mitranga manerantany, ary ny bilaogin-dahatsoratra  nosoratan'ny olona iray amin'ny solon'anarana hoe Naver Matomer tao amin'ny katalaogy “Ny Talenta Miavaka Ao Anatin'ny 28 Segondra” (28秒に一人の逸材さん ) no ahitana ny endriky ny maripejy sasany ao Japana.
Maro tamin'ireo maripejy, talohan'ny nizarana ny sary tao amin'ny Twitter , no hita tamin'ny lohateny novidina tao amin'ny Book Off  , andiana mpivaro-boky efa niasa manerana ny firenena ao Japana.
Efa nahavita namaky ny boky Otsuichi  “Summer, Fireworks, and My Dead Body”  (Lohataona, Afomanga, sy ny Fatiko) aho, boky iray hitako ihany tao amin'ny Boky Off, raha nandeha fiarandalamby hody aho. Nampiseho sary tena natao kitoatoa ny mpanoratra, ary nampidanaka ahy ny zavatra mampihorokoditra hitako tany amin'ny farany, fa ny zavatra tena faran'izay nampatahotra indrindra dia ny sarin'ilay olona hafahafa teo anelanelan'ny pejy farany.
Maripejy misitery sy matetika manahiran-tsaina no maripejy hafa naseho tao amin'ny bilaogin-dahatsoratr'i Naver Matome .
Nisy taratasy misy tenimiafina mifono misitery tao anaty boky efa nampiasaina … mihorinkoditra aho.
(Ahitana tenimiafina misitery ny sary namboarina , teny Japoney sarom-patarina )
Sioka: Nividy boky iray aho ary tsapako ny hadalana voarakitra tao anatiny.
Hafakely kokoa ny sasany :
Nisy sary kely mampiseho olona iray tao anatin'ny bokiko tonta…
Raha tena mahita hevitra hafakely kosa ny hafa :
Tena mahafinaritra ity maripejy natao tanana ity (tapaka taratasy dokambarotra tany amin'ny fivarotan-dehibe) tao anatin'ny bokiko tonta.
Misy ihany koa ireo maripejy izay toa somary misy hifandraisany amin'ny boky nisy azy:
Kay lety e, misy zavatra ato anatin'ity boky dikan'i Dogra Magra  izay novidiako tao amin'ny Boky Off ity. Misy maripejy Hello Kitty (Sanrio ) ato anatiny. Ary misy tarehin-tsoratra saro-bakiana miaraka amin'ny torolalàna famakian-teny nosoratana eo akaikiny. Nisy olona iray namaky ny (tantara nofinofin'ny mpitsongodia ) Yumeno Kyusaku  , tsy afeniko ny fientanentanako! Tena tsara ny boky tonta!
Indraindray misy valisoa tsy ampoizina hita ao amin'ny Boky Off:
Raha nividy boky 108 Yen (eo amin'ny 1$ Amerikana) aho tao amin'ny Boky Off dia nisy 4.000 Yen (eo amin'ny 40$ Amerikana) tao anatiny. Fa nahoana ary izany no sady vola taloha no vola yen 1000 vavao? Na izany aza , niverina ny volako.
Misy mampiseho ny fiainan'ny tompon'ny boky teo aloha mihitsy aza ny sasany.
Tao anatin'ny manga izay novidiako tao amin'ny Boky Off izy ity. Nalaina tamin'ny 19 Martsa 1995 ny sary.
Hita ao amin'ny bilaogin-dahatsoratra Naver Matome  ireo maripejy hafahafa maro kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/20/103692/
 bilaogin-dahatsoratra Naver Matome: https://matome.naver.jp/odai/2142631483329759301?page=1